डिस्कोक्सिन बनाम एड्डेलर: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कल्याण खेलहरु औषधि जानकारी, समाचार समाचार, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी प्रेस घरपालुवा जनावर कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट कम्पनी, चेकआउट
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> डिस्कोक्सिन बनाम एड्डेलर: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
डिस्कोक्सिन बनाम एड्डेलर: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
डेक्सोक्सिन र एडडेरल दुई औषधिहरू हुन् जुन केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (सीएनएस) उत्तेजकहरू भनेर चिनिने औषधीहरूको वर्गसँग सम्बन्धित छ। सीएनएस उत्तेजकहरू प्राय: ध्यान घाटा hyperactivity अस्थिरता (ADHD) को रूपमा चिनिने एक अवस्थाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
एडीएचडीको साथमा बिरामीको निदान गर्न धेरै चरणहरू र अवलोकनहरू लिन्छन्। एडीएचडीका बिरामीहरू दैनिक क्रियाकलापहरूमा सुन्ने, स ,्गठन, वा बिर्सिनेहरूसँग संघर्ष गर्न सक्छन्। तिनीहरूलाई कक्षाकोठा वा कार्यस्थल जस्ता सेटिंग्समा विशेष सुविधाको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ ताकि उनीहरूको काम सफलतापूर्वक पूरा गर्न।
एक पटक निदान भयो भने, त्यहाँ उपचार विकल्पहरू छन् यी बिरामीहरूलाई दैनिक क्रियाकलापको राम्रो स्तर हासिल गर्न र मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार गर्न मद्दत गर्न। CNS उत्तेजकहरू एक उपचार विकल्प हो। अन्य प्रख्यात एडीएचडी औषधिहरूले रिटेलिन (मेथिलफेनिडेट), कन्सर्ट्टा (मेथिलफिनिडेट एक्स्टेन्ड-रिलीज), डेट्राना (मेथिलफेनिडाटे), भ्याभन्से (लिस्डेक्साम्फेटामाइन), र फोकलिन / फोकलिन एक्सआर (डेक्मेथाइल्फेनिडेट) समावेश गर्दछ। ADHD का लागि गैर उत्तेजक उपचार विकल्पहरू पनि छन्। निम्न सेक्सनहरूमा ADHD निदान र उपचार विकल्पहरूको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
डेसोक्सिन र एड्डेलराल बीचका मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
डेक्सोक्सिन (मेथाम्फेटामाइन) एडीएचडीको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधी हो। यो मोटापाको छोटो अवधिको उपचारमा पनि संकेत गरीएको छ जुन अन्य हस्तक्षेप प्रतिरोधात्मक छ। ड्रग अफ-लेबल प्रयोग गरिएको छ, वा फार्क्ट एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) बाट स्वीकृति बिना, नार्कोलेप्सीको उपचारमा।
मेथाम्फेटमाइनको सक्रिय मेटाबोलिट एम्फेटेमाइन हो। एम्फेटामाइन्स नोरपाइनफ्रिनको रिलीजको लागि उत्तेजित गर्दछ, र यो गतिविधिको प्राथमिक साइट मस्तिष्कको सेरेब्रल कॉर्टेक्समा छ। एम्फेटामाइन्सद्वारा सीएनडी उत्तेजनाले थकानको कम भावना, मोटर गतिविधि र सतर्कतामा वृद्धि, र समग्र राम्रो मुडको निम्त्याउँछ।
औषधि प्रवर्तन एजेन्सी (डीईए) डेक्सोक्सिन ए मान्दछ तालिका दोस्रो मादक औषधि । यो यसको उच्च दुरुपयोग सम्भावनाको कारणले हो, र त्यहाँ डेक्सोक्सिन प्राप्त गर्नका लागि दिशानिर्देशहरू र प्रतिबन्धहरू हुन सक्छन्, जुन राज्य द्वारा भिन्न छ। डेसोक्सिनको सक्रिय संघटक, मेथाम्फेटाइन हाइड्रोक्लोराइड, स्ट्रीट ड्रगमा उहि घटक हो क्रिस्टल मेथ वा सडक मेथ भनेर चिनिन्छ। व्यक्तिगत ईतिहास वा पदार्थको दुरुपयोगको पारिवारिक इतिहास भएका बिरामीहरूलाई डेक्सोक्सिन तोकिनु हुँदैन। लामो अवधिमा, डेक्सोक्सिन जस्ता औषधिहरूको उच्च खुराकले फिर्ता लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ जब एक बिरामीले औषधि लिन असमर्थ हुन्छ। डेक्सोक्सिन मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ केवल एक शक्ति: mg मिग्रामा।
एडरेरल (एम्फेटामाइन / डेक्स्ट्रोमफेटामिन लवण) पनि एडीएचडीको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि हो। यसलाई नार्कोलेप्सीको उपचारमा एफडीए द्वारा पनि अनुमोदन गरिएको छ। एम्फेटामाइन र डेक्सट्रोमफेटामिन लवणको यस मिश्रणमा डेसोक्सिन जस्ता कार्यको समान संयन्त्र छ, नोरेपाइनफ्रिनको विमोचन।
डीईए ले पनि यसको दुरुपयोग सम्भावनाको कारणले एडेलर एक तालिका दोस्रो मादक पदार्थलाई मानेको छ। डेडोक्यान्सको तुलनामा एडेरालल धेरै फराकिलो दायरामा उपलब्ध छ। सम्पूर्ण रूपमा तत्काल रिलीज ट्याब्लेटहरू mg मिलीग्राम, .5..5 मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, १२..5 मिलीग्राम, १ mg मिलीग्राम, २० मिलीग्राम, र mg० मिलीग्रामको शक्तिमा उपलब्ध छन्। Adderall XR एक विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल फॉर्मूलेसन हो र mg मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, १ 15 मिलीग्राम, २० मिलीग्राम, २ mg मिलीग्राम, र mg० मिलीग्रामको शक्तिमा उपलब्ध छ।
Desoxyn र Adderall बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग केन्द्रीय स्नायु प्रणाली उत्तेजक केन्द्रीय स्नायु प्रणाली उत्तेजक
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति ब्रान्ड नाम र जेनेरिक उपलब्ध ब्रान्ड नाम र जेनेरिक उपलब्ध
मेटाफेटमाइन Amphetamine / dextroamphetamine लवण
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? तत्काल रिलीज ट्याब्लेट तत्काल रिलीज ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल
मानक खुराक के हो? Mg मिलीग्राम एक वा दुई पटक दैनिक पटक पटक २ tit मिलीग्राम / दिन Mg मिग्रि एक पटक वा दुई पटक पटक पटक mg० मिलीग्राम / दिन सम्म
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? दीर्घकालीन (अनिश्चित) दीर्घकालीन (अनिश्चित)
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? बच्चाहरू र किशोरावस्थाका6बर्ष र माथिका, वयस्कहरू बच्चाहरू र किशोर किशोरीहरू3बर्ष र माथिका, वयस्कहरू
सर्तहरू Desoxyn र Adderall द्वारा उपचार
डेक्सोक्सिनलाई एडीएचडीको उपचारमा संकेत गरिएको छ जुन मध्यमदेखि गम्भीर विकर्षण, छोटो ध्यान अवधि, hyperactivity, र आवेगबाट निस्किन्छ। यो मोटाई को छोटो अवधि (केहि हप्ता अवधि) उपचार मा पनि संकेत गरीएको छ जुन अन्य हस्तक्षेपहरू जस्तै आहार, व्यायाम, सामूहिक कार्यक्रमहरू, वा अन्य लागूपदार्थको लागि उत्तरदायी छैन। यो कहिलेकाँही अफर-लेबललाई नारकोलेप्सीको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ, वा अत्यधिक दिनको निन्द्रा।
एडरेल एडीएचडीको उपचारमा पनि संकेत गरिएको छ। यो माइनकोलेप्सी को उपचार को लागी एक अनुमोदित संकेत बोक्छ।
सर्त डेक्सोक्सिन Adderall
ध्यान hyperactivity घाटा डिसअर्डर (ADHD) हो हो
अवरोध मोटापा हो हैन
के डेक्सोक्सिन वा एडेराल अधिक प्रभावकारी छ?
जबकि डेक्सोक्सिनलाई एडीएचडीको उपचारमा संकेत गरिएको छ, यो अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्समा रुचाइएको उपचार होईन दिशाहरु ADHD प्रबन्धको लागि। अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्सले यी दिशानिर्देशहरू सिर्जना गर्न समीक्षा गरेको धेरै मेटा-विश्लेषणहरूको आधारमा, एडडेरल एडीएचडीको उपचारमा अत्यधिक प्रभावकारी मानिन्छ र पहिलो लाइन उपचार हो।
दीर्घकालीन प्रयोग methamphetamine फुफ्फुसीय धमनी उच्च रक्तचाप संग जोडिएको छ। यो ब्लक गरिएको संवहनी र दायाँ हृदय असफलता द्वारा विशेषता हो। एडीएचडी र अन्य बिरामीहरूको उपचारमा मेथाम्फेटमाइन छनौट गर्दा सल्लाहकारहरूलाई थप सावधानी अपनाउन प्रोत्साहित गरिन्छ।
कभरेज र डिस्कोक्सन बनाम लागत तुलना
डेक्सोक्सिन एक औषधी हो जुन सामान्यतया व्यावासायिक बीमाले ढाक्छ। चिकित्सा योजनाहरु द्वारा कभरेज फरक हुन सक्छ वा विशेष अपवादहरु बनाउन आवश्यक पर्दछ। जेनेरिक डेसोक्सिनको लागि बाहिरको पकेट मूल्य $ 600 को रूपमा उच्च हुन सक्छ। एकलकेयरबाटको कुपनले सामान्य फार्मेसीहरूमा सामान्यको मूल्य १०० भन्दा कममा ल्याउन सक्छ।
एडेलरल एक पर्चेको औषधि हो जुन सामान्यतया व्यावासायिक बीमाले ढाक्छ। चिकित्सा योजनाहरु द्वारा कभरेज फरक हुन सक्छ वा विशेष अपवादहरु बनाउन आवश्यक पर्दछ। जेनेरिक Adderall को लागी बाहिर को जेब मूल्य १००० भन्दा बढी हुन सक्छ। एक सिंगलकेयर कूपन सिंगलकेयरले मूल्य $ 30 भन्दा कममा कम गर्न सक्दछ।
मानक खुराक ,०, mg मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू ,०, mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
एकलकेयर लागत । 86- $ १ .० $ 29--50
देसोक्सिन बिरूद्ध Adderall को सामान्य साइड इफेक्ट
डेसोक्सिन र एडडेराल प्रत्येक एक गरीएको रक्तचाप, टाचिकार्डिया, र पैल्पिटेशनका उदाहरणहरू हुन्। केहि उदाहरणहरुमा, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन (हार्ट अट्याक) र अचानक मृत्यु भएको छ। पूर्व-अवस्थित कार्डियक विकृतिहरू जब डेसोक्सिन र एडडेराल जस्ता उत्तेजकहरू लिने क्रममा सावधानी अपनाउनुपर्दछ।
उत्तेजक ड्रग्सले निद्रा विकारलाई अनिद्राको रूपमा चिनिन्छ, वा झर्ने र निदाउन असमर्थता देखा पर्छ। यसले दैनिक कार्यलाई असर गर्न सक्छ र अनुगमन गरिनु पर्छ। सुख्खा मुख र चक्कर पनि उत्तेजकका राम्रो साइड इफेक्ट हुन्।
उत्तेजक औषधीहरू गम्भीर हृदय प्रतिकूल घटनाहरूसँग पनि सम्बन्धित छ, मृत्यु सहित, विशेष गरी हृदय दोष र ताल विकृतिहरू भएका बिरामीहरूमा, जस्तै अनियमित मुटुको धड्कन। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक मात्र निर्णय गर्न सक्दछ कुन उपचार तपाईको सर्तका लागि उत्तम हो।
यदि तपाईं यी कुनै पनि साइड इफेक्टको अनुभव गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले उनीहरूलाई तपाईंको हेल्थकेयर प्रोफेशनलसँग छलफल गर्नुपर्छ।
निम्नलिखित सम्भावित साइड इफेक्टहरूको एक समावेशी सूची हुनलाई लक्षित गरीएको छैन। एक पूर्ण सूची तपाईको स्वास्थ्यसेवा पेशेवरबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ।
उच्च रक्तचाप हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
टाचिकार्डिया हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
धमकी हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
अनिद्रा हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
भोक कम भयो हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
बान्ता हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
तौल घट्नु हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
सुख्खा मुख हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
चक्कर हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
स्रोत: डेक्सोक्सिन (डेलीमेड) Adderall (डेलीमेड)
डेसोक्सिन बिरूद्ध Adderall को ड्रग अन्तरक्रिया
मोनोआमिन अक्सिडेज इनहिबिटर (MAOIs) लिने बिरामीहरूमा डेसोक्सिन र एड्डेलरल प्रयोग गर्नु हुँदैन। MAOI antidepressants धीमे एम्फैटामाइन मेटाबोलिज्म, नोरपाइनफ्रिन र अन्य मोनोमाइन्सको स्नायु समाप्तबाट एम्फाटामाइनको प्रभाव बढाउँदै टाउको दुखाइ र उच्च रक्तचाप संकट को अन्य लक्षण पैदा गर्दछ।
सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको घटना बढ्न सक्दछ जब देक्सोक्सिन वा एडडेलर सेरोटोनर्जिक औषधिहरूको साथ प्रयोग गरिन्छ। यो सिन्ड्रोमले बिरामीलाई उत्तेजित, चक्कर आउँछ र मुटुको दर बढेको महसुस गर्न सक्छ। सेरोटोनर्जिक एजेन्टहरूले विभिन्न प्रकारका एन्टिडिप्रेसन्ट्सहरू समावेश गर्दछ जस्तै सेलेक्टिभ सेरोटोनिन रीउपटेक इनहिबिटरहरू, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसन्ट्स, र H एचटी ant विरोधी, अन्यथा ट्राइप्टनको रूपमा चिनिन्छ।
निम्नलिखित सूची लागुपदार्थको अन्तर्क्रियाको पूर्ण सूची हुने उद्देश्यले आएको छैन। सम्पूर्ण सूचीको लागि तपाईको डाक्टर वा फार्मासिष्टको सल्लाह लिन उत्तम हुन्छ।
औषधि औषधि वर्ग डेक्सोक्सिन Adderall
Linezolid मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधकर्ताहरू (MAOIs) हो हो
Escitalopram चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू (एसएसआरआई) हो हो
डेसेभेन्फाक्सिन छनौट नरेपाइनफ्रिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू (SNRIs) हो हो
Frovatriptan 5HT3 विरोधी (ट्रिप्टन) हो हो
लान्सोप्रजोल प्रोटोन पम्प अवरोधकर्ताहरू (पीपीआई) हो हो
Desoxyn र Adderall का चेतावनी
स्ट्रोकहरू, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, र अचानक मृत्यु डेसोक्सिन र एडडेरल जस्ता सीएनएस उत्तेजकहरू लिने बच्चाहरू र वयस्कहरूमा हुन सक्छ। यो पूर्व-अवस्थित हृदय शर्तहरू भएका बिरामीहरूमा हुने बढी सम्भावना हुन सक्छ। सल्लाहकारहरूले यी सर्तहरूको लागि स्क्रिन गर्न सक्दछन् र उनीहरूलाई हड्डीका विकृतिहरू हुने बिरामीहरूको लागि यी औषधिहरू लेख्न अत्यन्त सावधानी अपनाउनेछन्।
सीएनएस उत्तेजकहरूले पूर्व अवस्थित साइकियट्रिक डिसअर्डर भएका बिरामीहरूमा व्यवहार गडबडीलाई बढाउन सक्दछ। यदि यी सीएनएस उत्तेजकहरू आवश्यक छन् भने यी बिरामीहरूलाई राम्ररी अनुगमन गरिनु पर्छ। द्विध्रुवी बिरामीहरूले सीएनएस उत्तेजकहरूमा हुँदा मिश्रित वा मैनिक एपिसोडहरू अनुभव गर्न सक्दछन्।
बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूमा तौल र उचाइको अनुगमन गरिनु पर्छ उत्तेजकहरू लिने दीर्घकालीन प्रयोगले विकास दमन गर्न सक्छ। उत्तेजकमा हुँदा बिस्तारै बिस्तारै बृद्धि भएको बिरामीहरूलाई उपचारलाई अस्थायी रूपमा रोक्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। प्राय जसो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले बच्चाहरू स्कूलमा नहुँदा उपचारबाट विश्राम लिने सल्लाह दिन्छन्, जस्तै सप्ताहन्त, छुट्टीहरू र ग्रीष्मकालीन विश्रामहरू।
डेसोक्सिन र एडडेलरको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
डिस्कोक्सिन भनेको के हो?
डेक्सोक्सिन एक सीएनएस उत्तेजक हो जुन बच्चाहरू र वयस्कहरूमा एडीएचडीको उपचारमा प्रयोग हुन्छ। यो DEA द्वारा एक अनुसूची II मादक पदार्थको रूपमा मानिन्छ यसको दुरुपयोग सम्भावनाको कारण र यो पर्चेमा मात्र उपलब्ध छ। डेसोक्सन only मिग्रि तत्काल रिलीज ट्याब्लेटको रूपमा मात्र उपलब्ध छ।
Adderall पनि CNS उत्तेजक हो जुन बच्चाहरू र वयस्कहरूमा ADHD को उपचारमा प्रयोग हुन्छ। यो पनि यसको दुरुपयोग सम्भावनाको कारण डिईए द्वारा एक तालिका दोस्रो मादक पदार्थ मानीन्छ र यो पर्चेमा मात्र उपलब्ध छ। दुबै तत्काल रिलीज ट्याब्लेटहरू र विस्तारित-रिलीज क्याप्सूलमा विभिन्न सामर्थ्यमा उपलब्ध छ।
टाइप २ मधुमेह सामान्य रक्त शर्करा स्तर
के डेसोक्सन र एडरेल समान छन्?
जबकि तिनीहरू औषधीको समान वर्गमा सम्बन्धित छ र समान स share्केतहरू साझा गर्दछ, डेक्सोक्सिन र एडडेरल समान होइनन्। डेसोक्सिनमा मेथाम्फेटामाइन हुन्छ, जुन शरीरमा एम्फैटामिनमा परिणत हुन्छ। Adderall दुबै एम्फेटॅमिन र डेक्सट्रोमफेटामिन लवणको मिश्रण हो।
के डेक्सोक्सिन वा एडेराल राम्रो छ?
एडीएचडीको उपचारमा, अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्सले एडडेरललाई एडीएचडीको व्यवस्थापनमा पहिलो लाइन उपचारको रूपमा सिफारिश गर्दछ। उपलब्ध डाटाको तिनीहरूको विश्लेषणको आधारमा, तिनीहरूले एडीएचडीको उपचारमा डेक्सोक्सिन सिफारिस गर्दैनन्।
के म डेक्सोक्सिन प्रयोग गर्न सक्छु वा गर्भवती हुँदा एड्डेलरल?
डेक्सोक्सिन र एड्डेलरल गर्भावस्था कोटि सी हो, जहाँ सुरक्षा स्थापना गर्न पर्याप्त, नियन्त्रण अध्ययन हुँदैन। यी औषधिहरू गर्भावस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ जब लाभ स्पष्ट रूपमा जोखिमलाई पछाडि पार्छ।
के म Desoxyn प्रयोग गर्न सक्छु वा रक्सीको साथ Adderall?
मदिराको प्रयोगले एम्फेटामिन-सम्बन्धित औषधीहरूको सीरम रगतको सrations्द्रता बढाउन सक्छ, र यसैले जब यी औषधिहरूमा रक्सीको प्रयोग गर्नु हुँदैन।
देसोक्सिन कति लामो हुन्छ?
Desoxyn का प्रभावहरू खुराक लिइसके पछि minutes० मिनेट जति नै चाँडो सुरु हुन सक्छ र eight घण्टा सम्म रहन सक्छ।
के डिस्कोक्सन लत छ?
डेक्सोक्सिन एक अत्यधिक लत नियन्त्रणित पदार्थ हो र यसको दुरुपयोगको लागि उच्च क्षमता छ। यसै कारण DEA ले यसलाई तालिका II मादक पदार्थको रूपमा वर्गीकृत गर्दछ, र त्यहाँ निर्धारित गर्न प्रतिबन्धहरू छन्।
कसरी चाँडो र प्राकृतिक रक्तचाप कम गर्ने
रुघाखोकी कती लामो छ?
डेपो शट कति राम्रो काम गर्दछ
ज्वरो आउँदा के खाने
यदि तपाइँ hypoglycemic हुनुहुन्छ भने तपाइँ मधुमेह हुनुहुन्छ
के तपाइँ adderall र wellbutrin सँगै लिन सक्नुहुन्छ